Mamorona Konqi vaovao miaraka amin'i Krita | Avy amin'ny Linux
Te-handrafitra na hanao sary ve ianao? Amin'ity indray mitoraka ity dia manana fotoana ianao hamoronana endrika vaovao ho an'ny mascot an'ny Tetikasa KDE, fantatra eto amin'izao tontolo izao GNU / Linux como el Konqi, izay efa mihoatra ny 10 taona.
Eny, nokarakaraina ny fifaninanana izay hananantsika T-Shirt loka ho loka (T-shirt Krita Sprint voalohany) ary fonosana DVD hamoronana tantara an-tsary miaraka amin'i Krita (Kitapo DVD + Comics) ary ny hany zavatra tsy maintsy raisintsika ho takiana dia:
Tsy maintsy atao any Krita izany.
Homena fahazoan-dàlana amin'ny alàlan'ny LGPL V2 + ny kanto.
Tokony hanaraka ny Fitsipi-pitondrantena KDE izay midika, ohatra, fa i Konqui dia tsy tokony nikapoka gnome zaridaina tamin'ny tantanana lehibe. 😀
Afaka mahazo fampahalalana bebe kokoa ianao (amin'ny teny anglisy) ao amin'ny Ity rohy ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » famolavolana » Mamorona Konqi vaovao miaraka amin'i Krita
nampitsiky ahy tamin'ny fepetra fahatelo ianao !! 😀
Irwin dia hoy izy:
Tena ratsy aho mampiasa Mypaint
Valiny tamin'i Irwin
😀 Wii, manantena aho fa hamporisika ny fampiasana Krita izany ary maro ny fampianarana miseho! Marary aho mitady tutorial Krita sy mahita olona miteny hoe "USA GIMP"
Manao anime amin'ny krita sy totozy aho .. XD
Tsara ny kinia anime kinqi ..: 3 ..
tsotra, tsy misy pitsopitsony be dia be, fa vita tsara sy feno ..
toy ny kde ..>.